Iqela lokuhlela | Iindaba Zokuhamba
I-Viajes yenyani yiwebhusayithi eyiBhlog yencwadi. Iwebhusayithi yethu inikezelwe ilizwe lokuhamba kwaye kuyo siphakamisa iindawo zokufikisela zoqobo ngelixa sizimisele ukubonelela ngalo lonke ulwazi kunye neengcebiso malunga nokuhamba, iinkcubeko ezahlukeneyo zehlabathi kunye nokunikezelwa okuhle kunye nezikhokelo zabakhenkethi. Kwiminyaka eliqela sivelise i- I-podcast yokuhamba ebinempumelelo ebalulekileyo, ukufezekisa Indawo yokuqala kwiiMbasa zePodcast zaseYurophu Kudidi lweShishini eSpain kunye neyesine eYurophu ngonyaka ka-2011 kunye nokuba ngowokugqibela kwiminyaka 2010 y 2013.
Iqela lokuhlela le-Actualidad Viajes lenziwe abahambi abanomdla kunye ne-globetrotters zazo zonke iintlobo Ndonwabile ukwabelana ngamava abo kunye nolwazi kunye nawe. Ukuba ufuna ukubayinxalenye yayo, ungathandabuzi sibhale ngale fomu.
Ukusukela ukuba ndingumntwana ndiyathanda ukwazi ezinye iindawo, iinkcubeko kunye nabantu bazo. Xa ndihamba ndithatha amanqaku ukuze ndikwazi ukuhambisa kamva, ngamagama kunye nemifanekiso, yeyiphi indawo ekuya kuyo kwaye inokuba yeyomntu ofunda amagama am. Ukubhala kunye nokuhamba kuyafana, ndicinga ukuba bobabini bathatha ingqondo nentliziyo yakho kude kakhulu.
Ukwabelana ngamava am kwihlabathi liphela kunye nokuzama ukusasaza ukuthanda kwam ukuhamba yinto endiyithandayo. Yazi namasiko ezinye iidolophu kwaye ngokuqinisekileyo ulonwabo. Ke ukubhala malunga nale micimbi, ukuyisondeza kuluntu ngokubanzi, kundizalisa ngolwaneliseko.
Ndihlala ndizithanda iilwimi ezivela kwihlabathi liphela. Ke njengomfundisi-ntsapho wesiNgesi, ndiyakuthanda nokwazi ezo lwimi zahlukeneyo okanye iilwimi zokuqala. Uhambo ngalunye endilwenzileyo kukufunda okutsha endiza kukukhumbula ebomini bam.
Ukuthweswa isidanga kwiNtengiso, ndiyathanda ukubhala nokufumanisa amabali amatsha kunye neendawo okoko ndikhumbula. Ukuhamba yenye yezinto endizithandayo kwaye yiyo loo nto ndizama ukufumana lonke ulwazi malunga nezo ndawo ndinethemba lokuzibona ngenye imini.
Bathi zininzi iindidi zabahambi njengoko kukho abantu ehlabathini. Kuhambo lwam lonke ndaye ndanolwazi ngeentlobo ezahlukeneyo zemidla esinokuthi singene kuzo, ke kwiActualidad Viajes ndiza kukunika ulwazi oludingayo ukuze ukonwabele ngokupheleleyo iiholide zakho nakweyiphi na ikona yomhlaba.
Ndicinga ukuba ukuhamba yenye yezona zinto zityebileyo anokuphila ngazo umntu ... Ihlazo, ukuba imali iyafuneka kule nto, akunjalo? Ndifuna kwaye ndiza kuthetha ngazo zonke iintlobo zokuhamba kule bhlog kodwa ukuba ndiza kunika ukubaluleka kwento ethile, zizindawo apho ndiya khona ngaphandle kokushiya intywenka endleleni.
Kuba ndimncinci bendihlala ndifuna ukuhamba kwaye kancinci kancinci bendikwazi ukuba ngumhambi ongadinwa. Iindawo endizithandayo: iIndiya, iPeru kunye neAsturias, nangona zikhona ezinye ezininzi. Ndiyakuthanda ukurekhoda kwividiyo into endiyithandayo kwaye ngaphezu kwako konke ukuthatha iifoto kuye ngokungathi ungumJapan. Ndiyakuthanda ukuzama i-gastronomy yesiko lendawo endiyityelelayo kwaye indiphathele iiresiphi ezimbalwa kunye nezithako zokwenza ekhaya kwaye ndabelana ngazo nabantu bonke.